Araka izany, ilaina ampifanarahana tsara amin`ny filan`ny vahoaka sy ny tanjona napetraky ny filoham-pirenena nanaovany velirano tamin`ny vahoaka Malagasy, ny volavolan-tetibola handrafitra ny tetikasa sy lamina amin`ny taona 2020. Milaza fa ho hentitra ny filoha Rajoelina ka mitaky “asa-fahamatorana-fandraisana andraikitra » mifandraika amin`ny filan`ny vahoaka sy ny toe-java-misy isaky ny faritra no tokony hapetraka amin`ny fandrafetana ny volavolan-tetibola ho amin`ny taona 2020. Mila ampitomboina ny fandaniam-bola ara-tsosialy, ny famatsiam-bola natokana ho amin`ny fampiroboroboana ny fambolena. Midika izao fa amin`ny taona 2020 vao hanomboka ny asa IEM. Ny fitondram-panjakana ihany no nanamboamboatra ny tetibolany tao fa ny vola be famatsiam-bola tsy hita popoka kanefa be vava be ny filoha tamin`ny janoary 2018 hoe: “Efa vonona ny vola hanatanterahana ny IEM ka raha vao tonga eo amin’ny fitondrana isika dia tsy ankiandriandry intsony fa maika ny fampandrosoana. Misy ny vola satria neken’ny firenena maro tany Eoropa ny IEM ity. Ny vahiny no mitady antsika fa tsy isika no mitady azy ireo”. Ny zava-misy ankehitriny, nahena ny tetibola ho an`ireo minisitera maro samihafa. Ny fahasalamana, ohatra, dia nahena 25,4 miliara ariary. 27,9 miliara ariary kosa ho an`ny rano sy ny fidiovana. Ny sehatry ny fanabeazana ihany koa dia nahitana fihenana 33,8 miliara ariary. Tena maika amin’ny sehoseho ivelany ny fitondram-panjakana fa tsy mitsinjo lavitra mihitsy. Azo antoka fa hiha bado ny zaza malagasy raha izao no mitohy. Ankoatra izay, be loatra ny fifanoheran-kevitra amin`ny zavatra ambara sy ataon`ity fitondrana ity. Tompondakan`ny zavatra mifanipaka tanteraka. Ny zava-misy dia tsy misy mamatsy vola ny IEM. Mpandraharaha vahiny maro no nasain`ny filoha Rajoeilina nanodidina azy sy nentiny avy any ampitan-dranomasina nandritra ny fampahafantarana ny IEM. Natsangana izy ireny teo akaikiny mba hampisehoana fa ireo no mpandraharaha nanaiky ity IEM ity. Dia aiza ary ireny ankehitriny ? Tratry ny vely kobay ?